Ọkara Blackout MagicalTex Manufacturers & Suppliers - China Ọkara Blackout MagicalTex Factory
China N'ogbe polyester ọkara Blackout Fabric
MagicalTex Roller Blind Fabric bụ nke polyester nwere oke ike. Ọ bụ ọkara blackout nke nwere ike ichebe nzuzo gị ka mma. Fabricdị anyị nwere obere ezumike, nke nwere ike ijide n'aka na enweghị nkwarụ na akwa ahụ. Thickened silver-ntekwasa full shading azụ ákwà bụ ọlaọcha ntekwasa, waterproof na mmanụ na-àmà na mfe ọcha. Anyị nwere ike ịnye ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na ìsì maka ihe karịrị afọ 16. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịbụ a ga-adaba adaba otu nkwụsị zụọ maka ndị ahịa anyị. Ebumnuche anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa zuru oke. Anyị nwere obere MOQ, n'agbanyeghị na ọnụọgụ gị dị ukwuu ma ọ bụ obere, anyị nwere ike ịkwado gị. Anyị nwere ike na-enye free samples gị nke mbụ imekọ ihe ọnụ.
Oge gboo Mgbochi Blinds akwa Blackout
MagicalTex Motorized Window Shutters Blinds Fabric bụ nke polyester dị mma. Emechara ngwaahịa bụkwa otu n'ime isi ahịa anyị. Anyị nwere agba dị iche iche na obosara dị iche iche maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị mara mma na mma dị mma.Ọge anyị bụ ihe na-enweghị mmanụ na mmiri na-adịghị ekpuchi, ọ dị mfe ihicha, hichaa ozugbo etinyere ya. Ma o nwere ikike di nma na shading ma nwekwaa ezigbo onodu ikuku. Dabara adaba maka ulo na ulo oru.
Anyị nwere ihe karịrị 16 afọ ahụmahụ blinds akwa na sale ngwaahịa karịrị 200 mba. Anyị bụ ndị nrụpụta, anyị na-ere ngwaahịa na ndị ahịa anyị ozugbo, ọ nwere ike inyere gị aka ịhapụ mmefu ndị ọzọ. Ebumnuche anyị bụ ime ka ndụ gị ka mma. Na ezi mma na kacha mma ọrụ otu, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị.
Tainkwà mgbochi Fabric Semi Blackout Fabric White mkpuchi
MgicalTex Roller Blinds Fabric bụ nke polyester dị mma. Polyester yarn dị 100% ọhụrụ, na ihe niile sitere na Honeywell, nke na-eme ka ọ nwee ogo dị elu. Anyị nwere agba dị iche iche na obosara dị iche iche maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị mara mma na mma dị mma. Okwesiri maka Window French. Nwere ike ịnwe usoro echichi dị iche iche, dịka ntinye nwunye, ntinye mpụga, ntinye nwụnye na ihe ndị ọzọ.
Ngwaahịa anyị na-eme ka ndụ gị ka mma. Ngwaahịa anyị bụ nguzogide nrụgide na ndụ ogologo oge, na usoro ọrụ dị oke mma, mmetụta shading dịkwa mma nke ukwuu, ụkpụrụ dị ezigbo mma, ikuku dị mfe ma dịkwa mma. Anyị nwere obere MOQ, ọ bụrụ na iwu gị buru ibu, anyị ga-eme ndokwa maka gị, ma ọ bụrụ na iwu gị pere mpe, echegbula onwe anyị, anyị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa ere ọkụ. Na ọnụ ọnụ, ngwaahịa anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu!
Ahaziri Design ọkara Blackout ala Blind Fabric
MagicalTex Roller Blind Fabric bụ mmiri na-egbochi mmiri na ọkụ ọkụ na mma. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla.
MagicalTex Roller Blind Fabric bụ ebumnuche iji mee ka ndụ gị ka mma. Ngwaahịa anyị bụ nrụgide nrụgide na ndụ ogologo ndụ, na usoro ọrụ dị oke nlezianya, mmetụta shading dịkwa oke mma, ụkpụrụ dị mma nke ọma, ikuku dị mfe ma dịkwa mma, dị mfe iji wụnye. Na ọnụ ọnụ, ngwaahịa anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị nwere ike ịme azụmahịa ahaziri iche. N'ihi na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị!
Ahaziri Window Blind ala Fabric SemiBlackout
MagicalTex Roller Blind Fabric bụ nke polyester. Ọ bụ Ọkara ọkara nke nwere ike ichebe nzuzo gị nke ọma. Anyị nwere ike ịnye ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku.
Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ihe mkpuchi kacha dabara adaba maka mkpa windo ndị ahịa. Anyị nwere ike ịnye gị ụzọ kacha mma ejiji. Anyị nwere obere MOQ, anyị nwere ngwaahịa maka ọtụtụ ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ịhazi mbupu gị n'oge na-adịghị anya. Anyị nwere ike inye ndu ntuziaka maka ndị ahịa n'ụwa niile.
MagicalTex Eco-Friendly Roller Fabric Polyester Semi Blackout ka nke polyester. Ọ bụ Ọkara ọkara nke nwere ike ichebe nzuzo gị nke ọma. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Anyị nwere ike ịnye ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs.
Na elu mmepụta usoro, anyị mmepụta ikike bụ asọmpi, anyị na-eme 100% nnyocha niile nke anyị na. Oge mmepụta nwere ike ịchọ ụbọchị 30. Anyị nwere ike ịhazi nnyefe ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa. Anyị bụ ndị wholesales factory, anyị na ngwaahịa ndị na-ezi mma na price bụ asọmpi. Anyị nwere MOQ dị ala. N'ihi na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị.
MagicalTex Semi Blackout Roller Blind fabric ka nke polyester di nma. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ha mara mma, na-emesapụ aka na okomoko. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma.
MagicalTex Blackout Roller Blind fabric bụ mmiri na-egbochi mmiri na mgbochi ọkụ na mma dị mma. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla. Anyị nwere ike ịme azụmahịa ahaziri iche. Anyị bụ ndị nrụpụta, anyị na-ere ngwaahịa na ndị ahịa anyị ozugbo, ọ nwere ike inyere gị aka ịhapụ mmefu ndị ọzọ. N'ihi na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị!
Nnukwu Ogo Balcony Blinds Fabric Semi Blackout
MagicalTex Roller Blinds Fabric Semi Blackout Series ngwaahịa na-mere nke polyester na elu mma. Anyị na-enye akwa jacquard na ụzọ mkpuchi dị iche iche. Ugboro abụọ ihu itinye mkpuchi usoro nwere ike ime ka ọkara blackout akwa, ụfụfụ ọcha mkpuchi usoro nwere ike ime ka blackout akwa. Na elu ultrasonic ọnwụ technology, na-eme ya ọ bụla burr na nsọtụ, dị nnọọ mma. Ngwaahịa anyị dabara adaba maka ụlọ akwụkwọ, ọfịs na ụlọ. Nabata ozi gị!
Uwe anyị bụ mgbochi ọkụ na mmiri na-enweghị mmiri, ọ nwere ike ịgafe NFPA701（USA)asambodo, na agba ngwa ngwa ma ọ bụrụ na Ọkwa 4.5. Elu àgwà raw polyester ihe onwunwe na-eme ka anyị na akwa-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị nwere obere MOQ, ọ bụrụ na iwu gị buru ibu, anyị ga-eme ndokwa maka gị, ọ ga-achọ ihe dị ka ụbọchị 30 iji mepụta ha. Ọ bụrụ na ịtụ gị bụ obere, don'echegbula, anyị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa ire ere. Anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu maka gị ịlele ogo na agba.
Hot Sale ala Blind Fabric Ugboro abụọ Face Itinye Coati
MagicalTex Semi Blackout Roller Blind Fabric bụ nke polyester nwere ogo dị elu na ezigbo agwa. Iji usoro mkpuchi agba agba ihu abụọ nke na-eme ka ọ nwee mmetụta dị mma na ịhapụ mkpuchi nzuzo na nzuzo nzuzo. Ihe polyester dị mma nwere ike ime ka ọ dịgide, enweghị ebu, enweghị nla, enweghị nrụrụ, enweghị egwu mgbe eji ogologo oge.
New Design ákwà mgbochi Blind Fabric Semi Blackout
MagicalTex New Design Curtain Blind Semi Blackout Fabric bụ nke polyester. Amfụfụ na-acha ọcha na-eme ka ọ bụghị naanị ọkara blackout, kamakwa ọ nwere ọmarịcha anya. Anakwere na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa, na-abụghị egbu egbu na keenweghiuto nke na-eme ka a ala gburugburu gị. Okwesiri maka Window French. Anyị nwere agba dị iche iche na obosara dị iche iche maka nhọrọ gị. Anyị nwere ike ịme azụmaahịa OEM. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko.
MagicalTex Ihe eji eme ọhụụ Ihe eji ekpuchi ọhụụ bụ otu n'ime ihe mkpuchi ihu anyị. Ọ nwere ike ime ka ebe obibi dị jụụ. Adabara ụlọ na office use.Our akwa anyị bụ waterproof na ọkụ mgbochi. Anyị na-enye akwụkwọ ikike afọ 10 maka nke ọ bụla n'ime ihe anyị. Na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye n'omume gị.